C#.Net — MYSTERY ZILLION
June 2009 edited January 2010 in C#
ကျွန်တော် က အခုမှ MZ မှာ member ၀င်ထားတာပါ ၊ ကျွန်တော် အခု MPEC မှာ C#.Net သင်တန်းတက်နေပါတယ် ။ ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ Computer Programming လိုင်းမှာ .Net လိုင်းနဲ့Java လိုင်းဆိုပြီး နှစ်လိုင်း ရှိတယ် ။ .Net လိုင်း ကို လိုက်မယ်ဆိုရင် Java ကို လေ့လာလို ့ရသေးလား ၊ ကျွန်တော် က Application တွေဆွဲတာ ၀ါသနာပါတယ် ၊ အဲဒီတော့ application ဆွဲတဲ့ ဘက်မှာဆိုရင် Java ကပိုကောင်းလား .Net ကပိုကောင်းလား သိချင်ပါတယ်
ရှေ ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုဆက်လေ့လာသွားရမယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုင်းကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးစေချင်ပါတယ် :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5:
Computer Programming လိုင်းမှာ java နဲ့ .net နှစ်လိုင်းထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး.... လိုင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်.... ဒါပေမယ့် အခု လောလောဆယ်မှာ အသုံးအများဆုံး language နှစ်ခု ဖြစ်နေလို့ ဒီနှစ်ခုက popular ဖြစ်နေတာပါ..... .net ဖြစ်ဖြစ် java ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာ ပါ...... language ကို အသေမထားပါနဲ့...... သူ့ရဲ့ concept ကိုသာ အဓိကထားပါ...... အကို စိတ်၀င်စားမယ် language တစ်ခုကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိလေ့လာပြီးရင် ကျန်တဲ့ language တွေကို ပြန်လေ့လာလို့ ရပါတယ်..... သဘောတရားကတော့ ကားစီးသလိုပေါ့ဗျာ...... ခရီးတစ်ခုတည်းကိုသွားနေကြတာပါ (programming ဆိုတာ)..... အပေါ်လမ်းကသွားတာနဲ့ အောက်လမး်ကနေသွားတာ ဒါပဲကွာပါတယ်..... ဘယ်လမ်းကသွားသွား ခရီးရောက်ဖို့က အဓိကပါပဲ... language နောက်ကို မလိုက်ပါနဲ့..... application က အဲ့ဒီ Language နှစ်ခု စလုံးနဲ့ ရေးလို့ရပါတယ်...... java က dynamic ဆန်တယ်..... .net က static ဆန်တယ်.... .net ရဲ့ static ဆိုတာ လူဦးရေ (5) သောင်းကျော် control လုပ်နိုင်တဲ့ application ကိုရေးလို့ ရပါတယ်(static ဆိုလို့ သေးသေးလေး ထင်နေမှာစိုးလို့)........ java ရဲ့ dynamic ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့..... ဘယ်လိုင်းကို လိုက်ရမယ်ဆိုတာတော့ လူများကို အကြံ မတောင်းပါနဲ့..... ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် လိုင်းကိုသာ ရွေးပါ..... ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတာကို လူများပြောတိုင်းနားထောင်မိလို့..... နောက်မှ C# ဆိုတာ အချိုရေလား..... java ဆိုတာ ကော်ဖီလား ဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ........ တစ်ခုခုကိုသာ ဇောက်ချလုပ်ပါ........ အုန်းပင်တက်နိုင်ရင် ထန်းပင်လည်း တက်နိုင်မှာပါ........ အဓိက အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ခရီးရောက်ဖို့သာ အဓိကပါ ....... အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ......
programming language တွေက အများကြီးပါ.. .NET , Java,Ruby,Python စသည်ဖြစ်ပေါ့... တစ်ခုကို အရင်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်။ ပြီးမှ နောက်တစ်ခုလုပ်ပါ။ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်တော့ မလုပ်နဲ့ဗျ။ နောက်ဆုံး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ပဲ တတ်သွားမှာ။ ဘယ်အရာမှ ကျွမ်းကျင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်ဟာနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို အရင်လေ့လာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် PHP နဲ့မှ အဆင်ပြေသွားတာ။ အဲဒါမတိုင်ခင် .NET,Java စတာတွေကို လေ့လာဘူးတယ်။ သဘောမတွေ့ဘူး... Ruby ကိုလည်း ဖတ်ဘူးတယ်.. နားမလည်ဘူး... ROR လည်း လုပ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်.. အဆင်မပြေဘူး.. PHP နဲ့မှ အဆင်ပြေသွားပြီး PHP ပဲ ဆက်လုပ်သွားတယ်။ ဘာမှ မပြောင်းတော့ဘူး။ အခု PHP ကို ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိသွားမှ .NET ပြန်လုပ်နေတာပါ။ ဘာ language ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာကြည့်ပါ။ သဘောတွေ့တာဆို အဲဒါပဲ ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်သင့်တယ်။ ပြီးရင် အခြား ဘာပဲလေ့လာလေ့လာ လွယ်နေတာကို တွေ့မှာပါ။ အဓိကတော့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်နဲ့ အတွေ့အကြုံလိုတယ်။ concept လိုတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို MZ က ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာတွေ ဖတ်နိုင်တယ်။ ကိုသာသာ နဲ့ Programming လေ့လာရာဝယ် မှာ အကောင်းဆုံး ဆွေးနွေးချက်တွေရှိတယ်။
အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါဆို ကျွန်တော် C#.Net ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ် ၊ နောက်တော့မှပဲ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို Java ကိုလေ့လာသွားတော့မယ် ။ အခုကစပြီးလေ့လာသွားမှာပါ ၊အခက်အခဲများရှိရင်ဖြေကြားပေးပါဦးနော်။
ကောင်လေးနော် . !!:68:
ကို Bluerays ခင်ဗျား
MPEC ကသင်ရိုးက Singapore သင်ရိုး ကိုယူထားတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ ဒါဆိုရင် MPEC အပြင် C#.Net ကို ဘယ်မှာသင်ရင်ကော အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ခင်ဗျာ ၊
သိရင် ပြောပြပေးပါလား :101: :101: :101:
Psycho.man wrote: »
သင်တန်း ၂ ခု၊ ၃ခု ထပ်တက်မှာထက်စာရင် အခု သင်တန်းကနေ သင်ပေးလိုက်သလောက်ကို အခြေခံပြီး၊ ကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီး လေ့လာသွားရင် ပိုပြီး ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သင်တန်းမှာမှ အားလုံး ပြီးပြည့်စုံအောင် သင်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
သင်တန်းတွေ အများကြီးတက်မှ တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးညီလေး...... ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်.... နေရာတိုင်းမှာ မိုးရွာပါတယ်...... မိုးရေလိုချင်ရင်တော့ မိုးရေ ခံဖို့ပဲ လိုတာပါ.......
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ အခုလို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုတက်နေတဲ့ သင်တန်းမှာပဲ သင်ပေးသမျှကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင်ယူသွားပါ့မယ် ။ သင်တန်း ပြီးတော့ လည်း ဆက်လက် လေ့လာသင်ယူသွားပါ့မယ်။ မသိတာရှိရင် မေးမြန်း ပေးတာလေးတွေ ကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေး ပါဦးနော် ။
အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
C# နဲ့ ပတ်သက်ပြီး mz မှာ ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်.. မရတာရှိရင် မသိတာရှိရင်.. ဒါမှမဟုတ် သိချင်တာရှိရင် မေးနိုင်ပါတယ်..
ကျောင်းတက်တုန်းက Pseudo code နဲ့ C လုပ်ဖူးတယ်။
အခု C#.Net 2008 သွင်းလိုက်ပြီ။
ကျနော်လည်းခုမှ MZ member ပါ. ကျနော်လည်း C#.Net ကိုစိတ်၀င်စားတယ်..မသိတာများရှိရင် ကူညီပေးကြပါ...:103::103::103:
c#.net နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို့ပါ။ c#.net မှာ hashtable နဲ့ sorted list ဘာကွာသလဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ string ထဲက စာလုံးအရေအတွက်ကို သိချင်ရင် ဘယ် method ကို သုံးရလဲ။ ဒါမှမဟုတ် တခြားသိနိုင်တဲ့နညး်ရှိရင်လညး် သိချင်ပါတယ်။
A SortedList isasorted version ofaHashtable.
လို့ တော့ MSDN ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားဖတ်ပါ။
string ထဲက စာလုံး အရေအတွက်ကို သိချင်ရင် Length method ကို သုံးရပါတယ်။
string name = "Sevenlamp";
int totalcharcount = name.Length;